मार्क जुकरबर्गले सुरक्षाका लागि ल्यापटपको क्यामेरामा टाँसे सेतो टेप [Cyber Security]
Aakar June 27, 2016
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मार्क जुकरबर्गले अघिल्लो हप्ता उनको आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा सेयर गरेको एउटा फोटोको इन्टरनेटमा व्यापक चर्चा भयो । फोटो सेयरिङ एप् इन्स्टाग्रामको प्रयोगकर्ता ५० करोड पुगेको जानकारी दिन, जुकरबर्गले फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरेका थिए । मार्क जुकरबर्गले अपलोड गरेको फोटोमा, उनको ल्यापटपको वेवक्याम र माइकको ज्याकलाई टेपले छोपिएको देखिन्छ । धेरैलाई सामान्य लाग्ने यो फोटोले ईन्टरनेट सुरक्षाको अर्को खतारनाक पाटो उजागर गरेको छ । केही हप्ता पहिले मात्रै ह्याकरहरुले मार्क जकरबर्गको लिङ्कड्इन र ट्विटर प्रोफाइल ह्याक गरेका कारणबाट पनि यस फोटोको चर्चा चुलिएको हो । मार्क जुकरबर्गले आफ्नो ल्यापटपको वेवक्याम र माइक्रोफोनको ज्याक टेपले टाँसेको कुरा क्रिस ओल्सन नामक ट्विटर प्रयोकर्ताले ट्विटमा औँल्याएका थिए ।3things about this photo of Zuck: Camera covered with tape Mic jack covered with tape Email client is Thunderbird pic.twitter.com/vdQlF7RjQt — Chris Olson (@topherolson) June 21, 2016 वेवक्यामलाई टेपले छोप्नुलाई केहीले
आज गुगल सेक्युरिटि चेकअप गरौँ, २ जिबी ड्राइभ स्टोरेज फ्रिमा पाऔँ
Aakar February 09, 2016
" सेफर ईन्टरनेट डे २०१६ " को अवसर पारेर, यसवर्ष पनि गुगल'ले आज आफ्नो एकाउन्टको सेक्युरिटि चेकअप गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई २ जिबी स्पेश गुगल ड्राइभमा निशुल्क थपिदिने भएको छ । ईन्टरनेटमा सेक्युरिटि, गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो । हामी कतिपयले ईन्टरनेटमा एकदमै कमजोर पासवर्ड राखिरहेका हुन्छौँ, आफ्ना व्यक्तिगत डाटाहरु अरुले सजिलै भेट्ने किसिमले सेयर गरिरहेका पनि हुनसक्छौँ। नचाहिएका डिभाइस वा एपहरुमा कनेक्ट गरिरहेका हुनसक्छौँ । त्यसैले, ईन्टरनेटमा सुरक्षित रहौँ भन्ने सन्देश सहित, गुगल ले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो गुगल एकाउन्टको सेक्युरिटि चेकअप गर्न सुझाएको छ । सेक्युरिटी चेकअपमा, तपाईले आफ्नो फोन नम्बर, रिकभरी ईमेल ठिक छ कि छैन, कनेक्ट भएका एप्स र डिभाइस ठिक छन् कि छैनन्, साइन ईन देखाएका लोकेशन ठिक छन् कि छैनन्, आदि चेक गर्नसक्नुहुन्छ। साथै, सेक्युरिटि चेकअप गरेको खण्डमा, गुगल'ले निशुल्क २ जिबी स्पेश गुगल ड्राइभमा उपलब्ध पनि गराउनेछ । गत वर्ष पनि गुगल'ले यस्तै किसिमको बोनसको व्यवस्था गरेको थियो । पोहोर, सेक्युरिटि चेकअप गर्नेहरुले पनि, अहिले चेक
फोन हरायो? गुगल गर्नुस्
Aakar April 17, 2015
घरको कुनै कुनामा फोन छ, तर भेट्न सकिएन । कतै गइएको थियो, फोन छोडेर आइयो। आफ्नो फोन कहाँ छ, कसरी थाहा पाउने? गुगलको 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' ले तपाईको फोनको 'लोकेसन' भनिदिन्छ। 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को यही फिचर अब सिधै गुगल सर्चमा उपलब्ध भएको गुगल'ले गुगलप्लस मार्फत जनाएकोछ। गुगलमा गएर ' find my phone ' टाइप गरेपछि, अब फोनको लोकेसन सिधै सर्च रिजल्ट पेजको माथिल्लो भागमा देखिन्छ। घरमै छ भने त घन्टी बजाउन पनि सकियो, फोन 'साइलेन्ट' मोडमा भएपनि, गुगलबाट फोन गर्दा चर्को आवाजले घन्टी बज्छ। फोनको सुरक्षाको हिसाबले, ' एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर ' प्रयोग गर्नै पर्ने 'फिचर' हो। फोन हराएको खन्डमा, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को ड्यासबोर्डबाट आफ्नो फोन, खोज्न सकिन्छ, 'लक' गर्न सकिन्छ, अनि फोनमा भएका 'डेटा' सबै मेट्न पनि सकिन्छ। तपाईको फोन सँधै अनलाइन नहुनसक्छ वा 'लोकेशन अन' नभएको खन्डमा, गुगल'ले तपाईको फोन भएको अन्तिम 'लोकेसन' देखाउँछ । गुगलमा सर्च गर्दा तपाई आफ्नो गुगल एकाउन्टमा
इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (IOE) पुल्चोक क्याम्पस को साइट ह्याक भएको छ । आइतवार राती ह्याक भएको थाहा भएपनि, कसले साइट ह्याक गरेको भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । साइटलाई ह्याकरहरु ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर भिन्न भिन्न दुइ ‘पोर्न’ साइटहरु (पोर्नहव र रेडट्युब) मा रिडाइरेक्ट गराइदिएका हुन् । IOE को वेवसाइट ioe.edu.np लाई एउटा पोर्न साइटमा रिडाइरेक्ट गरिएको छ भने, www.ioe.edu.np लाई अर्को पोर्न साइटमा रिडाइरेक्ट गरिएको छ । साइटमा कोही छिरेर भन्दा पनि, साइटको कन्ट्रोल प्यानल नै ह्याक गरेर साइटलाई ३०१ रिडाइरेक्ट गरिएको हुनु पर्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । भर्ना को सिजन मा साइट ह्याक हुनु, अझ त्यो पनि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटकै साइट ह्याक हुनु अत्यन्त लज्जाजनक कुरा हो । हामीले साइट ह्याक भएको थाहा पाउने बित्तिकै फेसबुक बाट पुल्चोक क्याम्पस का केही प्रतिनिधिहरुलाई खबर गरिसकेका छौँ । साथै पुल्चोक क्याम्पसबाट कोही यो ब्लग पढ्दै हुनुहुन्छ भने, पुल्चोक क्याम्पस को सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त कामकारवाही बढाउन खबर गरिदिनुहोला । पुल्चोक क्याम्पसलाई हामीले गुगलक्यास मा यस्तो देख्यौँ !